Barattoonni Oromoo Yuunivarsitii Waldiyaa hiriira ba'uun mormii dhageessisan - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Woldia University
Barattoonni Oromoo Yunivarsiitii Waldiyaa ''guyyoota salgan darbaniif obsaan dirree keessa bullee jirra, amma garuu gara Oromiyaatti nu deebisaa' jechuun harra Wiixata ganama sa'aatii 12 irraa eegaluun mormii dhageessisan.
Yunvarsiitichatti saayinsii siyaasaa waggaa lammaffaa barachaa jireaachuu kn himu barataan Oromoo tokko guyyoota saglan darban haala rakkisaa keessa teenyee obsinus gaaffiin keenya deebii waan dhabeef har'a karaa nagaatiin sagalee keenya dhageessisuuf dirqamnee jedha.
"Hanga Har'aa seera mana barumsichaa fi seera raayyaa waraanaa kabajuuf jecha haala rakkisaa keessa teenyee obsaa turre. Dirreerra ciisneeti hanga har'aa kan geenye. Har'a bakkuma bullu kanatti baanuun osoo waraanaanis walitti hin bu'in nagaadhaan sagalee keenya kan dhageessifne" jedha.
Barumsa barachuuf nageenyi keenya eegamee bilisummaa yoo qabaanne malee haala amma keessa jirruun barachuu hin dandeenyu kan jedhu barataan kun, hiriira har'aa kanarrattis dhaadannoo ijoon 'gara Oromiyaa nudeebisaa'kan jedhu ture jedha.
Bakka guyyoota saglan darbe bulaa jiran kanatti rakkoo qulqullinaa waan jiruuf dhibeef saaxilamaa jiraachuus himu barattoonni.
"Guyyaa saglan kana bakka qaama itti dhiqannu hin qabnu xuroofnee jirra, mana fincaaniis dirreerratti fayyadamna. Du'a lammaffaa mootummaan nurratti gaggeessaa jira. Kanaafi har'a sagalee keenya dhageessisuuf kan dirqamne" jedha.
Yunvarsiitii Waldiyaatti muummee Baayolojii waggaa lammaffaa barachaa jiraachuu kan himtu barattuun Oromoo tokkos rakkoon dubartootarra gahu kan warra dhiiraa caalaa hammaatadha jetti.
"Dubartoonni keenya qulqullinaa fi yeroo laguun itti dhufee 'moodasii' argachuu dhabnee rakkoo hamaa keessa jirra. Dubartoonni sababa Kanaan dhiphina keessa seenanii dhukkubsachaa jiran hedduudha.
Wanta dubartootaaf barbaachisu tokkollee hin qabnu," jetti.
Fedhii barachuu qabaannus haala yaaddessaa amma keessa jirru kanaan lubbuudhaan jiraachuun barachuu waan dursuuf fedhii asitti barachuu hin qabnus jetti.
"Kan amma nu eegaa jiru kuni dormiitti, mana nyaataatti, mana kitaabaatti dhufee nun eegu. Namni asitti baradhaa nuun jedhu nama du'aa nuun jedhudha malee nuti haala amma keessa jirruun barnoota hin barbaannu. Gara haadha, abbaa fi firoota keenyaa, gara Oromiyaatti keenyaatti galuu qofa barbaanna," Jette.Hiriira yunvarsiitii waldiyaatti har'a gaggeefame kanaratti barattoonni Oromoo hanga kuma afurii ta'an hirmaachuus himu barattoonni.Hiriirichi har'a karaa nagaatiin xumuramuu kan himan barattoonni Oromoo kunneen, hanga gara Oromiyaatti nudeebisanitti gaaffii fi diddaa keenya dhageessisuu itti fufna jedhaniiru.
Yuunivarsitii Dirree Dhawaa maaltu mudate?
Yuunivarsitii Dirree Dhawaa keessatti erga Kamisa darbe kaaffee barattootaa keessatti jeequmsi uumamee mooraan yuunivarsitichaa sodaadhaan guutameera jedhu barattoonni dubbisne.
Gamtaa barattootaa Yuunivarsitii Dirree Dhawaatti pirezidaantii barattoota Shamarranii kan taate Ya'aabsiraa Asfaaw kamisa kaaffeetti jeequmsi uumamee Jimaata ammo barataan tokko gamoorraa kufee du'uun erga dhaga'amee as mooraan yuunivarsitihcaa sodaadhaan waan guutameef barataan mooraa irraan utaalee badaa jira jetti.
Waanti mooraa yuunivarsitchaa keessatti uumame qoratamaa jiraatullee barataan garuu sodaadhaan guutameera jetti Ya'aabsiraan.
Ya'aabsiraa fi barataan biraan maqaan isaa akka hin eeramne gaafate akka nuuf mirkaneessanitti barattoonni sodaa qabanirraa kan ka'e mooraa irraan utaalanii kan badaniif ulaa guddichaan ba'uu waan dhorkamaniifi.
Kibxata addaan cite kan ture hojiin baruu fi barsiisuu har'a itti fufuuf yaadamullee barataan hedduun mooraa irraan utaalee waan bade jiruuf barattoota muraasa mooraa keessatti hafaniin barumsa itti fufuun waan hin danda'amneef hafeera jetti Ya'aabsiraan.
Barattoota mooraa Yuunivarsitii Dirree Dhawaa irraa akka iyyaafannetti hookkarri hagas mara jiraachuu baatullee barattoonni garuu mooraa gadi dhiisaa jiru
Akka Ya'aabsiraan jettutti barattoota shamarranii irratti yakki gudeeddii raawwatameera oduun jedhu jiraatullee garuu iyyannoon akkasii gara gamtaa barattootaas ta'e biiroo dhimmi koorniyaa hin dhufne jetti.
"Doormii irra deemnee gaafataa turre. Hospitaalas deemnee adda baasuu yaalleerra. Barattoota shamarranii Kamisa darbe miidhaman hospitaalatti gaafanneerra.'' Jetti Ya'aabsiraan.
Yeroo ammaa mooraan yuunivarsitichaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaatiin eegamaa jiraachuus dubbatti.
Hooggantoonni maal jedhan
Dhibdee Yuunivarsitii Waldiyaa keessatti mudate furuuf qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo, jaarsoliin biyyaa ,abbootiin amantaa fi bulchiinsi Yuunivarsitichaa tibba darbe marii gaggeessaniiru.
Haata'u malee hanga ammaatti gaaffiin isaanii akka hin deebinee fi inumaa dararaa fi sodaa hamaa keessa akka jiran dubbatu barattoonni.
Qaamoleen marii gaggeessan kunneen nageenyi yuunivarsitichaa eegamee barattoonni barnoota isaanii akka itti fufan gaafatanillee barattoonni garuu ammallee sodaa qaban irraa gara maatii isaaniitti deebi'uu akka barbaadan dubbatu.
Erga hookkarri yuunivarsitii Waldiyaa keessatti uumamee as mooraan yuunivarsitichaa poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannoo Amaaraatiin eegamaa jira.
Rakkoo Yuunivarsitii Waldiyaa keessatti uumame booda yuuniverstiiwwan biyyattii hedduu keessatti rakkoon walfakkaataan mudachuu itti fufeera.
Tibba darbe waa'ee hookkara Yuunivarsitiiwwan keessa jiraniirratti kan dubbatan Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad rakkoon kan hammaatu yoo ta'e yeroof yuunivarsitiillee hanga cufuutti deemna jedhanii turan.